Cudduda Dhalinyrada Cusub ee Ogaden oo Balan Qaaday in Uuna Hankaagayn Halganka Gobonimodoonka Ogadeeniya. – Rasaasa News
Dhawaan waxaa magaalada Menneapolis lagu qabtay kulan balaadhan oo lagu xusay sanad guurada 4aad ee ururka dhalinyada ardayda Ogadeeniya [OYSU].
Kulankan oo aad u xiiso badnaa, ayaa ahaa kulankii ugu balaadhnaa oo baryahan ka dhaca Menneapolis, kaas si xoog leh loogu taageeray halganka ay ku jirto Somalida Ogadeniya.
Xarunta xafladaha Minneapolis [conventional centre], oo kulanku ka dhacay, ayaa lagu xardhay calanka Ogadeeniya iyo astaamaha ururka dhalinyarta ardayda Ogadeeniya, kuwaas oo si wayn u soo jiitay indhaha dadkii kulanka fadhiyey.
Ururka dhalinyarta ardayda Ogadeeniya, ayaa soo bandhigay niyad iyo cuddud xoog leh oo ay ku taageerayaan halganka Somalida Ogadeeniya. Waxaa xusid muddan in dhalinyarada badankoodu yihiin, kuwa waalidkood ay dishay Atoobiya.
Dhalinyaradan oo ku barbaaray dalalka galbeedka, oo laga qadariyo xuquuqda iyo xoriyada dadka, ayaa si wayn uga soo horjeeda hagardaamooyinka gumaysi ee ay Atoobiya u gaysato shacabka Somalida Ogadeeniya.
Shirkan oo ku soo beegmay xili ay dad badan u dhag raaricinayaan, sabaalaha Ismaamulka Somalid Itoobiya ugu yeedhayo Qurbojoogta, ayaa si wayn wax looggaga sheegay kuwa uu hungurigu ka tanbadiyey.
Ururka Dhalinyarada ardayda Oadeeniya, oo soo bandhigay fan masraxeed qiimo badan oo ka turjumaya xaalada ka jirta Ogadeeniya, ayaa ku balanqaaday in xitaa hayday ONLF, daasho uuna hankaagayn halganka Ogadeeniya. Iyaga oo sheegay in ay qabaan wacyi galin iyo aaminsanaanta halganka umadooda oo ay ka midho dhalin doonaan xoriyada Ogaden.
Muuqaaladan iyo abaabulkan xooga leh ee ka muuqda kulanka Mineapolis, ayaa walaac hor leh ku abuuri kara Atoobiya iyo Ismaamulkaba. Iyaga oo baryahan dambe dareemayey in uu soo yaraanayo dhaqdhaaqa iyo taageerada ururka ONLF ee ka jira dibada.
10 Caaqil oo Gabalka Qoraxay Lagu Xidhay